I-AdPushup: Lawula futhi uthuthukise Izakhiwo Zakho Zesikhangiso | Martech Zone
I-AdPushup: Lawula futhi Lungiselela Izakhiwo Zakho Zesikhangiso
NgeSonto, Okthoba 23, 2016 NgeSonto, Okthoba 23, 2016 Douglas Karr
Njengommemezeli, esinye sezinqumo esinzima kakhulu ekwenzeni imali ngesiza sakho ibhalansi phakathi kwemali engenayo eyengeziwe noma ukucekela phansi ulwazi lwakho lomsebenzisi. Silwa nalokhu esele futhi - kufaka nezikhangiso eziqonde ngqo ezifanele kumsebenzisi. Ithemba lethu ukuthi izikhangiso zethu zinweba okuqukethwe ngokunikela ngemikhiqizo noma izinsizakalo ezingasiza.
Okubi kakhulu ukuthi izivakashi zalesi siza ziqala ukungazinaki izikhangiso. I-AdPushup, uhlelo lokulawula nokwandisa ukwakheka kwezikhangiso zakho, lubiza lokhu ibhena lokungaboni. I-AdPushup ihlangana kalula nesayithi lakho futhi ikuvumela ukuthi wakhe izindawo ezingeziwe zezikhangiso zakho, kufaka phakathi okuqukethwe.
I-AdPushup inikeza ipulatifomu ekuvumela ukuthi ukwandise usayizi, umbala, uhlobo nokubekwa kwezikhangiso zakho ezikhona. Uhlelo lusebenzisa ukufunda komshini ukunciphisa isidingo sokungenelela komuntu nokuzinikela kwesikhathi, ngenkathi kulungiselelwa ukubekwa kwesikhangiso ukukhulisa imali.
Izici ze-AdPushup Faka:
Ukuhlelwa Kokukhangisa - Dala izivivinyo zesakhiwo sesikhangiso futhi uthuthukise ngokuzenzakalela osayizi bezikhangiso, ukubekwa, izinhlobo, nemibala.
Ubuchwepheshe bokusebenzisa okuzenzakalelayo kokuqukethwe - Ukuskena kokuqukethwe okuzenzakalelayo kokuqukethwe nokufaka ngokukhalipha izikhangiso kokuqukethwe kwakho ngaphandle kokuthinta i-UX.
Ukuphathwa kwezikhangiso ezibonakalayo - Sebenzisa iphoyinti bese ukhetha isihleli sokubuka ukulawula izakhiwo eziningi zesikhangiso bese usetha izivivinyo ngaphandle kokufaka amakhodi.
Ukusebenziseka Kokusebenza Komsebenzisi - Khulisa imali engenayo ngaphandle kokuyekethisa isipiliyoni sezivakashi zewebhusayithi yakho noma uguqule isifanekiso sayo sokwakha.
Injini Yokuqhakambisa Okukhaliphile Ekhaliphile - Ukufunda ngomshini kwenza uhlelo luzifunde futhi luzivumelanise nezimo zokushintsha kwezivakashi ukukhombisa izakhiwo ezifanele kakhulu zezikhangiso eziheha ukunakwa kwazo.
Ukuhlukaniswa nokwenziwa ngezifiso - Dala izethameli nezigaba ngokuzenzakalela zokwenza izakhiwo zibe zinhle ukuze kuthuthukiswe umuzwa wezivakashi.
Ukuhlaziya nokubika - Hlala usesikhathini nokusebenza kwe-akhawunti yakho ngokulandela imiphumela ngokujulile analytics, nemibiko yangokwezifiso.
Ukusebenziswa Kokulethwa Kwesikhangiso - Izikhangiso zilethwa umbani ngokushesha ngokusebenzisa inethiwekhi yethu yokuhanjiswa kokumiswa kwe-Geo ebeka umthwalo omncane kumaseva wakho.
Ukuhlanganiswa ne-Google AdSense / AdX - ukuhlanganiswa Seamless nge Google AdSense ne-DoubleClick Ad Exchange (AdX) ekuvumela ukuthi uqalise ngokuchofoza okukodwa.
Ukuthobela Inqubomgomo ye-Google AdSense - Izikhangiso zakho ezilungiselelwe zilethwa ngenethiwekhi yokulethwa kokumiswa kwe-Geo ebeka umthwalo omncane kumaseva akho.
Mhlawumbe into ethakazelisa kakhulu mayelana I-AdPushup ukuthi intengo isuselwa kusabelo semali ngokuzibophezela okuncane.
Tags: Ukwenza kahle ukulethwa kwezikhangisoukuhlelwa kwesikhangisoUkuhlelwa kokuhlelwa kwesikhangisoukubikwa kokuhlelwa kwesikhangisoUkwenza kahle izikhangisoi-adpushupi-adxUkuphathwa kwezikhangiso ze-bannerIsibhengezo sesikhangiso sesibhengezoizikhangiso ze-bannerUkwenza kahle kwe-bannerukwenza ngezifiso ibhenaukwahlukaniswa kwesibhengezoQhafaza kabilii-Google adsenseUkuthobela Inqubomgomo ye-Google AdSenseUkusebenziseka kokuhlangenwe nakho komsebenzisiukuphathwa kwezikhangiso ezibukwayo
Umbono6: Isixazululo Esingabizi, Esenziwe Ngokwezifiso, se-Enterprise Marketing Automation